Radanoara Julien : « Misy tsy fanaran-dalàn’ny mpitondra ny « Raharaha Claudine » » | NewsMada
Radanoara Julien : « Misy tsy fanaran-dalàn’ny mpitondra ny « Raharaha Claudine » »
« Samy mahalala isika ny tsy fanajana lalàmpanorenana sy ny lalàna hafa eto amintsika.
ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine », nanaovana fampandosirana azy izay voalamina tsara, ao anatin’ny tsy fanajana lalàna. Tsy ny olona rehetra no anaovana izany, fa misy olona manokana. »
Izay ny fanazavan’ny eo anivon’ny Herin’ny fanovana, Radanoara Julien, teny Andrainarivo, afakomaly, tamin’ny famelabelaran-kevitra nataony « Ny fampiasana ny zo sy ny fahafahan’ny vahoaka eto Madagasikara ».
Toy izany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny mpitondra fanjakana izay ny « Raharaha Andriamandavy VII Riana »: eo imason’ny mpitandro filaminana mitarika olona hitora-bato ny Bianco, eny Ambohibao. Na efa nipetraka aza ny fitorian’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), nosintonin’ny mpampanoa lalana, araka ny fanazavany. Amin’izany, tany tan-dalàna isika sa manao ahoana?
Iniana tsy ampahafantarina ny vahoaka ny lalàna sy ny zony
Iniana tsy ampahafantarin’ny mpitondra ny vahoaka ny lalàna sy ny zony amin’izany, araka ny fanazavana ihany. Mizara efatra, ohatra, ny zon’olombelona. Eo ny zo fizarazarana: zo ho an’ny vehivavy, ny ankizy, ny sembana, ny gadra… Ny zo sivily: zo fizaka-manana, ho velona… Ny zo politika: fahalalahana maneho hevitra, zo fahazoana manana hevitra hafa, zo sendikaly, zo hanao fitokonana sy hanao hetsika, zo hahalala vaovao… Ary ny zo ara-toerana, sosialy sy kolontsaina: zo hanana asa, zo hanana trano…
Amin’izay zo sosialy izay, ohatra, zon’ny olom-pirenena ny mitaky amin’ireo nampindramina fahefana. Izy no te ho eo amin’ny fitondrana hoe hanamaivana ny fahoriam-bahoaka. Azo takina avokoa ny zo hanana asa sy trano fonenana; hahazo sakafo, fitsaboana, fampianarana, rano madio fisotro… Iniana tsy ampahafantarin’ny mpitondra ny vahoaka izany? Sao takin’ny vahoaka…